Doon ay leeyihiin ganacsato Soomaaliyeed oo ku gubatay dalka Cumaan – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Doon ay leeyihiin ganacsato Soomaaliyeed oo ku gubatay dalka Cumaan
A warsame 31 December 2014 31 December 2014
Mareeg.com: Doon ganacsi oo ay leeyihiin Soomaali ayaa ku gubatay dekkada magaalada Salalah ee dalka Cumaan.
Doontan oo lagu magacaabo Al Yaasiin ayuu dab xoogleh qabsaday xalay saqdhexe sida ay sheegeen saraakiisha dekkada Salalah.
Doontan ayaa xoolo nool oo laga keenay Soomaaliya geysay dekkada gobalka Dhofar ee dalka Cumaan.
Ciidamada dab-damiska iyo kuwa bada ee cumaan oo u gurmaday doontan ayaa la sheegay inay soo badbaadiyeen 15 nin oo ka shaqeenayey doontaasi. Waxaana la sheegay in hada baaritaan lagu wado doontan gubatay.
Dab-damiska ayaa ugu danbeyntii ku guuleystay inay dabkaasi damiyaan subaxnimadii Arbacada saacadu markay ahayd 6dii aroornimo.
Akhri: Duqeymaha Mareykanku ka geystay Soomaliya & magacyada dadkii lagu dilay
Baarlamanka Soomaaliya oo meelmariyey miisaaniyadda 2015